नियमित यौनसम्पर्क: हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना न्यून… « Bagmati Page
माघ १८, २०७७ आईतबार
नियमित यौनसम्पर्क: हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना न्यून…
एजेन्सी । बुढ्यौली र दीर्घायु हुनु कसैको बसमा हुँदैन । विज्ञानका अनुसार पढाई, व्यायाम गर्नु र स्वस्थकर खाना खानु नै एक स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक चीज हुन् । तर, पछिल्लो समय अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारीरिक सम्बन्ध पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।
अनुसन्धानका अनुसार ‘सेक्स लाइफ’ सक्रिय हुनेहरुको हृदयघातपछि पनि मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ । जसले एक हप्तामा एकभन्दा बढी पटक सेक्स गर्छ त्यस्ता व्यक्तिको हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना २७ प्रतिशत कम हुन्छ ।
यद्यपि, सेक्स नगर्नेहरुको मृत्यु हुने सम्भावना ८ प्रतिशत मात्रै कम हुन्छ । यसमा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पार्टनरको लगावमा पनि भर पर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ । यसैगरी, हप्तामा एक पटक सेक्स गर्नेको उमेर ३७ प्रतिशत लामो हुन्छ ।
अमेरिकी जर्नल अफ कार्डियोलोजीमा छापिएको एक अध्ययनका अनुसार सेक्सले उमेर लम्ब्याउँछ । उक्त अध्ययनका अनुसार सेक्स कम गर्ने पुरुषमा मुटुको रोग लाग्ने खतराका साथै इरेक्टाइल डिसफंक्शनको समस्या पनि बढाउँछ । साथै, यौन क्रियाकलापमा सक्रिय हुने पुरुषमा शारीरिक सक्रियता बढाउने क्षमता धेरै हुन्छ ।
विजय दिवसको मौकामा रुसका राजदूतमाथि हमला
काठमाडौं । पोल्याण्डका लागि रुसी राजदूत सर्गेई एन्ड्रिभलाई विजय दिवसको वार्षिकोत्सवमा रातो पेन्टमार्फत् प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण
सागमा स्वर्ण विजेता सञ्जु ललितपुरमा मृत फेला
काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) की स्वर्ण पदक विजेता सञ्जु चौधरी मंगलबार
कपनको डुवानमा स्थानीय सरकार किन मौन ? कता गयो दीर्घकालिन योजना !
काठमाडौं । कयौ वर्ष देखी बुढानिलकण्ठ नगरपालिका कपन क्षेत्रको डुबानले स्थानीय नागरीकहरु विभिन्न समस्या भोग्न
ललितपुरको अक्सिजन प्लान्ट विस्फोट, एकको मृत्यु
ललितपुर । ललितपुर अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । पाटन औद्योगिक
जान्नुहोस्, गहिरो श्वास लिनुका फाइदाहरु
दैनिक केही समय गहिरो श्वास लिनाले तपाईंको स्वास्थ र जीवनशैलीमा धेरै सुधार हुन्छ । जब
एकैदिन चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । चट्याङ लागेर काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरमा मंगलबार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको
डब्लुएचओका महानिर्देशक भोली नेपाल आउने
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस तीन दिने नेपाल